Caawinta hooyonimada ee Isbaanishka | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Gargaarka hooyonimada ee Isbaanishka
Goorta la gaaro waqtiga naag uur qaadaysa Dhowr shaki ayaa soo ifbaxaya, gaar ahaan bay'adooda shaqo. Su'aalaha jawaabaha leh iyo in maqaalkan aan shaaca ka qaadi doonno.
Tusaale ahaan, ogaanshaha dheefaha hooyada kiiskan oo diiradda la saarayo hooyada. Waa run in kharashka dhaqaale ee ku lug leh korinta cunuggu uu aad u ballaaran yahay isla markaana riixid kasta oo ka timaadda Gobolka ay yar tahay.
Waxaa jira barnaamijyada taageerada Kuwaas oo loogu talagalay in laga caawiyo adeegyada ilmuhu u baahan yahay koritaankooda iyo sidoo kale in laga caawiyo hooyada hawsha haddii ay shaqeyneyso waqtiga uurka.
Gudaha Isbaanishka waxaa ka jira barnaamijyo bixiya kaalmooyin kaladuwan oo dabcan lagu bixiyo bilaash, tan, si looga caawiyo kor u qaadista heerka dhalashada Spain kaas oo sii yaraanayay sannadihii la soo dhaafay, gobolku wuxuu siiyaa gargaar lacageed oo fara badan iyo goynta dhalashada ilmaha.
1 Gargaarka hooyonimada ee gobolka inankeenna
2 Gargaarka hooyonimada ee dhalashada ama korsashada.
3 Caawinta daryeelka kumeelgaarka ah ujeeddooyinka korsashada ama daryeelka korinta joogtada ah.
4 Caawi qoysaska waaweyn.
5 Ka jarista cashuurta dakhliga shaqsiga.
6 Lacagta hooyonimada.
7 Fasaxa hooyonimada.
9 Immisa ayaa laga qaadaa
Gargaarka hooyonimada ee gobolka inankeenna
Xaaladdan oo kale, midkood waalidkiis cunuggu wuu dalban karaa caawimaad, oo hal lacag bixintiisa la xisaabinayo iyadoo la tixgelinayo mushaharka xirfadleyda waalidiinta ee sanadkaan socda (hadda mushaharka ugu yar Spain waa 735.90 euro) iyo tirada carruurta iska leh ama korsaday iyadoo kuxiran kiiska.
Hadday leeyihiin laba carruur ah mushaharka ugu yar ee xirfad-yaqaannada waxaa lagu dhuftay afar, hadday leeyihiin saddex carruur ah mushaharka ugu yar waxaa lagu dhuftaa siddeed haddii aad leedahay afar carruur ah ama ka badanna mushaharka ugu yar waxaa lagu dhuftaa laba iyo toban.
Haddii ay dhacdo in mid ka mid ah carruurta uu ku dhacay a naafanimo u dhiganta ama ka weyn 33%, waa in la labalaabaa.
Gargaarka aan soo sheegnay ayaa sidoo kale la jaan qaadi kara faa'iidooyinka dhalashada ama korsashada qoysaska waaweyn, hooyooyinka naafada ah iyo waalidiinta kelidood ah, lacagta hawlgabka agoonta, gunnada hooyada ee dhalmada, iyo kuwo kale.
Gargaarka hooyonimada ee dhalashada ama korsashada.
Marka qoysasku ka badnaan waayaan xadka dakhliga qaarkood oo duruufaha soo socda qaarkood lala kulmo, Sooshiyaal Sikiyuuriti waxay ku deeqday gargaar dhan 1.000 euro hal lacag bixin:
Carruurta ku dhalatay ama korsatay qoys waalid keli ah: taasi waa, qoyskaas oo uu ka kooban yahay oo keliya waalid keligiis ah waana kan ilmuhu la nool yahay.
Carruurta ku dhalatay ama korsatay qoysaska waaweyn: taasi waa, qoysaskaas oo leh carruur aad u tiro badan ama xaaladdan ku hela waqti ka dib.
Carruurta ku dhalatay ama korsatay qoysaska hooyada ay ka haysato naafonimo u dhiganta ama ka sarreysa 65%: tan, illaa inta dhalashada ama korsashada cunugga ay ka dhacayso gudaha Spain.
Muuqaalka kor ku xusan waa laga dhaafay RIPF (Canshuurta Dakhliga Shakhsiyeed) waana la jaanqaadi kara dhalashada ilmaha ama dheefaha korsashada qoysaska waaweyn, hooyooyinka naafada ah iyo waalidiinta kelidood ah, lacagta hawlgabka agoonta, gunnada hooyada ee dhalmada, iyo kuwo kale.
Caawinta daryeelka kumeelgaarka ah ujeeddooyinka korsashada ama daryeelka korinta joogtada ah.
Kaalmadan waxaa la siiyaa ilmo kasta ama ilmo kasta oo da'diisu ka yar tahay 18 sano, ama ku guuldareysta taas, carruurta naafada ah oo da'doodu ka yar tahay ama ka weyn tahay 18 sano mas'uuliyad u dhiganta ama ka badan 65%, taas ayaa mas'uul ka ah ka-faa'iideystaha, iyo sidoo kale kan badbaadiyey ujeedada korsashada iyo daryeelka korinta joogtada ah.
Labadan xaaladood, shuruudaha kala duwan waa in looga baahan yahay mid kasta oo ka mid ah:
Si aad u hesho caawimaad dhaqaale carruurta ka yar 18 sano uma baahnid inaad dhaafto xadka dakhliga.
Si loo helo caawimaad carruurta naafada ah, waxay lagama maarmaan noqon doontaa in qofka masuulka ka ah ilmaha uu awood u yeesho inuu xaqiijiyo in naafonimadu tahay 33%.
Caawi qoysaska waaweyn.
Si qoysku uga faa'iideysto gargaarka noocan ah, waa inuu lahaadaa cinwaan weyn oo qoys waajib ah, oo qeexaya hadday tahay nooc guud, laga bilaabo saddex illaa afar carruur ah ama qayb gaar ah, laga bilaabo shan carruur ah iyo wixii ka dambeeya.
Caawinaadan awgeed waxaa jira nooc goyn go'an oo lagu dabaqi karo bayaanka dakhliga ama, lagu helo 100 euro bishiiba lacag hormaris ah.
Ka jariddu waa sida soo socota iyadoo kuxiran qoyska:
1200 euro goynta, oo gaar u ah qoysaska waaweyn.
1200 euro oo laga jaro, oo gaar u ah qoysaska leh carruurta naafada ah.
2400 euro oo laga jaro, oo gaar u ah qoysaska leh nooc gaar ah.
Iyo ugu yaraan, waxay leeyihiin taxane ah faa'iidooyinka gobolka iyo qiimo dhimista gaar ah sida gaadiidka, xarumaha dhaqanka, shaqaalaha guryaha, khidmadaha waxbarashada, duulimaadyada, iyo kuwo kale.
Ka jarista cashuurta dakhliga shaqsiga.
Hooyooyinka ismaamula ama keligood shaqeeya oo ka diiwaangashan nidaamka u dhigma ee Lambarka Bulshada, waxaa laga yaabaa in laga dhimo lacag dhan 1.200 euro sanadkii cunug walba oo kayar seddex sano bayaanka dakhliga inuu ku dhashay ama lagu korsaday dhulka Isbaanishka gudahiisa.
Gunnada hooyonimada ama aabbanimada, oo ah faa iido dhaqaale oo laga helo Lambarka Bulshada ee shaqaalaha.
Ma aha wax ka badan faa iidada sii wadista helitaanka mushaharka ee lagu jiro muddada nasashada ee dhalashada ilmaha.
Arrin kale oo iyaduna muhiim u ah xilliga dhalmada waa waqtiga loogu talo galay ilmaha dhalashada, tan darteed, hooyooyinka waa inay codsadaan fasax hooyanimo kumeelgaar ah si meelahooda shaqada loo xushmeeyo oo loo siiyo isbuucyo naafonimo dhalmada iyo daryeelka ilmaha.
In kasta oo uur yeelashada, iyadoo shaqeyneysa sanadihii hore si aad ah loo takooray oo xitaa hooyadu shaqadeeda ku weysay, maanta sifiican ayaa loo ilaaliyaa sharciga waxaanna si qoto dheer ugu sharixi doonaa arintan
Fasaxa hooyanimada Waa faa'iido ay siiso Lambarka Bulshada oo aqoonsan joojinta shaqada ee shaqada hooyada, korsashada iyo daryeelka korinta ah ee joogtada ah ama fudud ee korsashada ah.
Cayrintu waxay socotaa muddo 16 toddobaad ah oo loogu raaxeysan doono si aan kala go 'lahayn oo lagu kordhiyo laba toddobaad oo dheeraad ah laga bilaabo cunugga labaad ee dhasha, haddii ay dhacdo inuu jiro isbitaal dhigis, waxay ku dheereysaa waqtiga ay sii dheereyneyso illaa 13 toddobaad ka badan haddii loo baahdo.
Si aad uga faa'iideysato faa'iidadan, waa inaad u hoggaansantaa laba shuruudood oo muhiim ah:
Joog sare ee Lambarka Bulshada Haddii hooyadu aysan u diiwaangashanayn shaqaale ahaan ama iskeed u shaqeysata, waxaa jira xaalado taas tan sidoo kale lagu fulin karo, sida wadarta guud ee shaqo la'aanta oo lagu helo dheefo waxtar leh, wareejinta shaqaalaha ee shirkadda ka baxsan dhulka qaranka xaaladaha kale.
Aqoonsiga a muddada tabaruca ugu yar: markay shaqaaluhu ka yar yihiin 21 sano, uma baahna ugu yaraan muddo ah, si kastaba ha noqotee haddii aysan da'daas lahayn, waa inay u dhexaysaa 21 illaa 26 sano oo ay yeelataa 90-maalmood oo tabarruc ah 7 sano gudahood iyo in ka badan in ka badan 26 sano waa in la siiyaa 180 maalmood toddobada sano.
Immisa ayaa laga qaadaa
Si loo ogaado inta hooyada ama aabaha laga siin doono joojinta hooyonimada, mushaar bixinta bishii hore waa in loo tixraacaa tixraac, halkaas oo aad ka arki karto sanduuq loo yaqaan 'Contingencies Common', kaas oo lacagtaas loo qaybiyo 30ka maalmood ee bil iyo natiijada ka soo baxdaa waa mushaarka maalinlaha ah ee la bixin doono. Faa'iidadiisa ay bixiso INSS.
Fasaxa hooyanimada wuxuu socdaa 16 toddobaad oo aan kala go ’lahayn haddii aysan jirin duruufo aan caadi ahayn sida xaaladaha soo socda:
Ilmaha labaad laga bilaabo, 2 toddobaad oo naafonimo ah ayaa la bixiyaa muddada dhalmada.
Haddii uu yahay ilmo naafo ah, waa inuu u dhigmaa ama ka weynaadaa 33% si markaa laba toddobaad oo dheeri ah loogu oggolaado waqtiga dhalmada.
Haddii ay tahay dhalasho dhicis ah ama xaalad kasta oo dalbanaysa in isbitaal la dhigo waqti dheer iyada oo aan loo eegin sababta. Haddii isbitaal dhigistu ay socoto in ka badan 7 maalmood, hooyadu waxay codsan kartaa waqti dheeri ah, oo xitaa laga yaabo inay daboosho illaa 13 toddobaad iyadoo kuxiran xaaladda. Sidoo kale waa la dheereyn karaa ilaa 13 usbuuc marka ilmaha dhasha uu ku jiro mudo dheer isbitaal dhigis ka badan intii caadiga ahayd.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Gargaarka hooyonimada ee Isbaanishka
Brexit iyo Talyaanigu waxay soo bandhigi doonaan dadweynaha toddobaadkan
Waa maxay hawlgabka dheeriga ah ee hawlgabka ah?